Leukopenia - ukunciphisa isibalo leukocyte egazini neuropathy ngezansi 4x10 / l. Lesi simo akusona okuhlukile bokuphila enhle, futhi uhlale ibonakalisa izinguquko ezinkulu sokugembula emzimbeni. Leukopenia kwenzeka eziningi izifo omsakazo ezibangelwa amagciwane kanye ezibangelwa amagciwane. Kakhulu etholakalayo ngokuvamile ngemisebe, elibangela: i-typhoid fever, brucellosis, isifo sokusha kwesibindi kohlobo viral, leishmaniasis visceral, isifo sofuba miliary, a myocarditis okwathatha isikhathi eside kangako ukonakala. Lokho, kungaba izifo kokubili oyingozi futhi ezingalapheki.
izifo olunamandla ezithathelwanayo ingasenza ihlonzwe ngesisekelo ukwanda izinga lokushisa lomzimba, ejwayelekile idatha zocwaningo laboratory emitholampilo. Leukopenia, elibangela umalaleveva spirochetosis uphawu yizinambuzane kungenzeka ngezikhathi ezithile futhi eqaphela ngesikhathi kuhlaselwa lesi sifo ngesikhathi esifanayo ne ukuthuthukiswa neutropenia futhi lymphopenia. Phakathi nenkathi extraseizure waphawula lymphocytosis isihlobo, futhi monocytosis.
ukuvuvukala oyingozi futhi ezingalapheki, kuhlanganise, futhi ukonakala ukuthuthukiswa izifo leukopenia kuyinto inkomba ebalulekile reactivity encishisiwe kwesimiso somzimba sokuzivikela ezifweni, ikakhulukazi iziguli esezikhulile futhi ezingondlekile kahle. leukopenia eziphikelelayo kuvamile ukungondleki, eziningi izicubu ngokukhukhumala kwentamo zezinzwa, okuhlanganisa omzimba izicubu erythematosus, periarteritis nodosa futhi Felty Syndrome. Esinye sezifo ezinzima kakhulu ezicutshini kuyinto omzimba izicubu erythematosus. Kungahlonzwa esekelwe izimpawu ezifana dermatitis, polyserositis, samathambo, polyarthralgia, imfiva ophikelelayo, okwanda ESR, khona egazini neuropathy noma ethize lupus lyupusnyh amaseli bese okusezingeni eliphezulu antinuclear omzimba titer. Felty syndrome sibonisa ezithinta amalunga omzimba, imfiva, kweNdikimba ubende kanye lymph node kanye nezimpawu igazi, kukhuphuke erythrocyte sedimentation isilinganiso, amazinga aphezulu isici samathambo futhi omzimba antinuclear.
Ngezinye anaemia nokulinganisela thrombocytopenia, leukopenia ezimbi zingenza nokuhlukileko. Izizathu kwezimo ezinjalo zivame ezihlobene splenomegaly (kweNdikimba ubende), okuyinto eyenzeka njalo kakhulu isibindi sibe sesomile.
Leukopenia raznoobrazobraznye esihambisana izifo kohlelo igazi. izifo ezinjalo zingase zibe sokuntuleka kwegazi kanye wegazi. Emisebeni ezivamile, izimbangela zezinkumbulo okuyizinto ezihlobene wegazi acute, anaemia Addison-Birmera futhi uthi hypoplastic futhi anaemia aplastic. Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla wegazi acute is elibekwe esekelwe ohambisana isifo esiyingozi anemiya, ukonakala suppurative futhi oluhambisana syndromes, kanye izifundo umnkantsha punctate igazi ukuhlaziywa kanye nezinguquko ashukumisayo.
Ngokuvamile leukopenia yezifo kohlelo endocrine - thyrotoxicosis, acromegaly, esingamahlalakhona adrenal. Mhlawumbe yena kanye ukuvuvukala okungalapheki emizimbeni cavernous yokusetshenziswa pheshana emathunjini.
Leyopeniya ngokuvamile kwenzeka njengoba ukusabela komzimba ukuze nokwelashwa ngamakhemikhali ekwelapheni umdlavuza. Isicelo amalungiselelo chemotherapeutic ezicindezelayo zonke izinhlaka futhi izinhlelo. Ngemva ukwelashwa leukopenia, kwavela kancane kancane ubalekela ngesikhatsi ngamakhemikhali. Ngokuhamba kwesikhathi, inani leukocyte egazini ubuyiselwa evamile kancane.
Sahlola kwezimbangela eziyinhloko ongaphakeme igazi leukocyte. Yini obungayenza yisiphi isifo iye leukopenia ezihlobene, imiphumela kulesi simo kukhona e ukwehla elibukhali umzimba ozivikela. Ngenxa yalokho, phakathi leucopenia ngokuvamile wajoyina yizifo ezihlukahlukene ezithathelwanayo ukonakala, kakhulu Okwenza lo isifo esikhulu.
"Nerf" - izibhamu inkampani Hasbro